Virus wuxuu ku Faafey dalal badan, 'adduunkuna diyaar u maaha Xakameyntiisa' – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Virus wuxuu ku Faafey dalal badan, ‘adduunkuna diyaar u maaha Xakameyntiisa’
Cudurkaan cusub ee loo yaqaan ‘coronavirus’ wuxuu ku faafayay Arbacadii iyadoo kiisaska kuuriyada koonfureed ay kor u dhaafeen 1000 ka dib markii dhimashada ay ku sii badatay Iran iyo infekshannada ayaa ka soo muuqday wadamadii aan hore loo qabin, taasoo dhalisay digniino culus oo ah in dunidu aysan diyaar u aheyn inay xakameyso.
Fayrasku si dhakhso ah ayuu ugu faafay qaybo ka mid ah Aasiya, Yurub iyo Bariga Dhexe, xitaa iyadoo tirada kiisaska cusub iyo dhimashada ay hoos ugu dhacday xaruntii cudurka ka dilaacey ee Shiinaha.
Magaalooyinka isku socodkooda waa la xirrey iyagoo isku dayaya in la joojiyo fiditaanka, halka hoteellada ku yaal Jasiiradaha Canary iyo Austria la xiray Talaadadii kiisaska la tuhunsan yahay darteed.
Dalka Iiraan, oo laga soo sheegay 15 dhimasho oo ku dhawaad ​​100 jeer uu cudurku ku dhacay, xitaa wasiir ku xigeenka caafimaadka Iraj Harirchi ayaa sheegay inuu ku dhacay fayraska.
Madaxa xarunta caafimaadka adduunka ee Geneva, Bruce Aylward, oo madax u ah hawl wadeen khubaro caalami ah oo u dhashay Shiinaha, ayaa amaanay tallaabada karantiilnimada iyo xakamaynta adag ee uu dalku qaaday.
Laakiin wuxuu u sheegay weriyeyaasha in aduunyada kale aysan “diyaar u ahayn” inay xakameeyaan cudurka.
“Waa inaad diyaar u ahaataa inaad dan u maamusho si baaxad weyn … waana in si dhakhso leh loo sameeyaa,” Aylward ayaa yidhi.
Fayraska ayaa diley 2,715 qof waxaana uu ku dhacay in kabadan 78,000 gudaha Shiinaha. Waxaa la soo weriyey 52 dhimasho oo dheeri ah oo la soo sheegey arbacadii – kuwa ugu hooseeya muddo seddex toddobaad ah – iyada oo aan jirin wax dhimasho ah oo ka dhacday bannaanka xarunta dhexe ee gobolka Hubei.
Komishanka Caafimaadka Qaranka ayaa sidoo kale sheegay in hoos u dhac ku yimid cudurada cusub 406, oo kaliya shan ka baxsan Hubei – tiradaas ayaa kor u qaadi doonta kalsoonida ah in dalka intiisa kale uu hayo cudurka.
Dunida inteeda kale, waxaa jiray in kabadan 40 dhimasho iyo 2,700 xaaladood.
Cudurkan ayaa hada soo gaadhay tobanaan wadamo, iyadoo Austria, Croatia iyo Switzerland ay ugu dambeeyeen ee sheega kiisaska.
Carqaladda faafa cudurka ayaa sidoo kale koray, iyadoo suuqyada saamiyada ay dunidu ku turunturoodaan adduunka, xayiraad lagu soo rogay dadka safarka ah iyo munaasabadaha cayaaraha.
WHO waxay ugu baaqday waddammada inay “u diyaargaroobaan cudur faafa” – erey loo isticmaalo in lagu qeexo cudurka faafa ee ku faafa adduunka oo dhan.
Wadamada saboolka ah ayaa gaar ahaan halis ugu jira, WHO ayaa ka digtay.
Kuuriyada Koofureed ayaa Arbacadii soo sheegtay 169 caabuq oo cusub, taas oo wadar ahaan noqotay 1,146 – oo ah tan ugu badan ee ka baxsan dibadda Shiinaha – halka qofkii 11aad uu dhintey.
Askariga 23-jirka ah ee Mareykan ah ee saldhigga Camp Carroll ee Daegu isna sidoo kale cudurka ayaa ku dhacay. Ilaa 28,500 oo ciidamada Mareykanka ah ayaa la geeyay Kuuriyada Koonfureed.
Badi tirada dadka – boqolkiiba 90 – ee cudurada cusub waxay ku sugnaayeen Daegu, oo ah magaalada afaraad ee ugu weyn dalka iyo xudunta u dillaacay, iyo gobolka deriska la ah ee Waqooyiga Gyeongsang.
Wadooyinka Daegu – oo ay ku nool yihiin dad gaaraya 2.5 milyan – ayaa si ba’an looga maqnaa maalmo, marka laga reebo safaf dhaadheer oo ku yaal dukaamada yar yar ee leh maaskaro iibin ah.
Maamulka ayaa ku booriyay dadweynaha in ay taxadar dheeraad ah muujiyaan, iyaga oo kula talinaya muwaadiniinta in ay gurigooda joogaan haddii ay leeyihiin
Xoghayaha arrimaha dibedda ee Mareykanka Mike Pompeo, oo waddankiisu yimid qarka u saaran dagaalka Iran horaantii sanadkaan, ayaa sheegay in Washington ay aad uga walaacsantahay Tehraan “waxaa laga yaabaa inay hoos u dhigto faahfaahinta muhiimka ah” ee ku saabsan dillaaca halkaas.
Wadamada khaliijka ayaa ku dhawaaqay talaabooyin cusub oo lagu goynayo xiriirka ay la leeyihiin Iran isku dayo lagu joojinayo faafitaanka.
Dhanka kale Talyaanigu – oo soo sheegay 11 dhimasho iyo in ka badan 300 oo xaaladood – ayaa xidhay 11 magaalo isla markaana amar ku bixiyay in ciyaaraha kubada cagta ee Serie A lagu ciyaaro garoomo madhan.
Nin dhalinyaro ah oo ku soo noqdey Croatia kana yimid Talyaaniga ayaa noqday kiiskii ugu horreeyay ee ka dhaca gobolka Balkans.
Wadanka Mareeykanka, oo leh dhawr iyo toban kiis, maamulayaasha caafimaadka ayaa ku booriyay dawladaha hoose, ganacsatada iyo iskuulada inay horumariyaan qorshooyinka sida joojinta shirarka wadareedka ama u wareejinta dhanka isgaarsiinta maaddaama uu waddanku ku kalsoon yahay in virusku sii fidayo.
Dalka Iiraan, oo laga soo sheegay 15 dhimasho oo ku dhawaad ​​100 cudur ah, xitaa wasiir kuxigeenka caafimaadka Iraj Harirchi ayaa sheegay inuu ku dhacay cudurka fayraska.
Wadamada iyo dhulalka la xaqiijiyay kiisaska COVID-19, ilaa Febaraayo 26, 0300 GMT
Talyaaniga, oo soo sheegay 10 dhimasho iyo in kabadan 300 oo kiis, ayaa xiray 11 magaalo oo amartay in ciyaaraha kubada cagta Serie A lagu ciyaaro garoomo madhan.
Booliiska Mounted ayaa booqanaya dadka ku nool meelaha durugsan ee Altay, oo ku yaal gobolka Xinjiang ee Shiinaha ka fog si ay kor ugu qaadaan wacyiga viruska
WHO, hay’adda caafimaadka ee Qaramada Midoobay, ayaa ugu baaqday waddammada inay “isu diyaariyaan musiibo suurogal ah” – erey loo isticmaalay in lagu qeexo cudur faafa oo ku faafaya adduunka oo dhan.